Baqattoonni Oromoo 800 olitti shallagaman ka biyya Misra magaalaa Kaayroo keessa jiraatan mormii saanii dhageesisaa oolan – Welcome to bilisummaa
Baqattoonni Oromoo 800 olitti shallagaman ka biyya Misra magaalaa Kaayroo keessa jiraatan mormii saanii dhageesisaa oolan
bilisummaa October 29, 2014	Leave a comment
Hiriira Mormii baqattottonni Oromoo kaayroo jiraatan Habashotaa fii Embaasii Ethiopia tiif qaban agarsiisuuf Onkololeysa 28/2014 fuula UNHCR Kaayroo duratti gadgeysa olan haalaa miidhagaa fii injifanno bonsaan xumuramee jira.
Hiriiraa nageyaa baqattonni Oromoo magaalaa Kaayroo jiraatan gadgeeysan kuni ganama keeysaa sa`atii 10tti wayta egalamuu hawwasnii hiriira kanarraa qodaa fudhatan akka qopheysitonni himanitti nama 800 kana caalutuu irraa qooda irraa fudhatee jechuus dubbatanii jiru.
Hiriira nageyaa fii balaaleyfanaa Habashaatiif bahamee kana Ijolleen mana barumsaa barattu fii haawwaan akkasuma manguddonni fii shamarran Oromo tokklleen oso hin hafin hiriiracharraa qoda guddaa fudhachuudhaan hiriirichaaf midhigina guddaa kennanii fii jiru.
Dhaadannon hiriira kanaa Keziin Oromoo Oromoo qofaafi dhiibbaan habshootaa fii embaassii wayyaanee Kaayroo nurraa haa dhabbatu jechuun barreyfamaan UNHCRtti galfatanii jirru.
Maayyiirratti boqattoonni Waajjira UNHCR Kaayroo irraa namni sadii himannaa baqattoota Oromoo Kaayroo kana irraa dhaggeyfachuudhaan furmaata itti laachuu fiis ballama cimaa galanii fii jiru,
Previous Ethiopia ‘targets’ Oromo ethnic group, says Amnesty
Next VOA; Mootummaan Itiyoopiyaa uummata Oromoo Irratti Kallattiin Qiyyaafatee Dararaa Geggeessa